ဘာ့ကြောင့်မျက်ကွင်းညိုတာလဲ? သူတို့ကို ဘယ်လိုတိုက်ထုတ်မလဲ? - Lifestyle Myanmar
ပန်ဒါမျက်လုံးလို မျက်လုံးအောက် ညိုမဲနေသူတစ်ယောက်ကို ကျွန်မတို့ တွေ့တဲ့အခါ “အိုး! သူမအိပ်ခဲ့ရဘူးနဲ့တူတယ်”လို့ အရင်ဆုံး တွေးကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာထက် dark circles ဖြစ်ရတဲ့ အခြားအချက်တွေ ရှိပါသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မျက်ကွင်းညို (dark circles) ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းနှင့် ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတဲ့ အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
မျက်လုံးအောက်မှာ မျက်ကွင်းညိုရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းဟာ လူပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။ သို့သော် မျက်လုံးအောက်မှာ ဒီလိုအမည်းရိပ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက hyperpigmentation ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော သွေးကြောတွေမှာ အခမဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ အောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ Hyperpigmentation ကို မယ်လနင်လို့ခေါ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်မှ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ မျက်အိတ်တွေလို့ လူသိများတဲ့အရာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို သတိလက်လွတ်ပွတ်ခြင်း၊ နေရောင်အလွန်အကျွံထိတွေ့ခြင်း (သို့) အိပ်စက်မှု မလုံလောက်ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အိုမင်းခြင်းနှင့် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ တခြားအချက်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် dark circles တွေက အလာ့ဂျစ်၊ နှင်းခူ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် သွေးအားနည်းရောဂါ စတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
Melaninက ကျွန်မတို့ရဲ့ အသားအရေ၊ ဆံပင်၊ မျက်လုံးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်းအရောင်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသော ကျွန်မတို့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ သဘာဝအညိုရောင် (သို့) အနက်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်မျက်လုံးအောက်မှာ မယ်လနင်အလွန်အကျွံ ဝင်ရောက်ခြင်းကနေ တားဆီးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သင့်လျော်တဲ့ အိပ်စက်ပုံအနေအထားကို လေ့ကျင့်ပါ
ဖြောင့်မတ်တဲ့ အနေအထားနဲ့ အိပ်ခြင်းက မို့ဖောင်းတာကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ သင်အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ အထူးသဖြင့် flat position အတိုင်းအိပ်တဲ့အခါ အရည်တွေက မျက်လုံးအောက်မှာ စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းကို အနည်းငယ်မြှင့်ထားခြင်းဖြင့် ထိုအရည်တွေ တည်ဆောက်မှုကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာ ကောင်းစွာ အနားယူထားတဲ့ မျက်နှာအသွင်အပြင်မျိုး ကျန်နေပါလိမ့်မယ်။
၂။ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တာ ရှောင်ပါ
ဘယ်အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်မဆို သင့်မျက်နှာကို နေရောင်ခြည်နဲ့ မထိတွေ့စေဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ နေရောင်ခြည်က ကျွန်မတို့အရေပြားကို မြန်မြန်အိုမင်းစေယုံသာမက အန္တရာယ်ရှိသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေက အရေပြားကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ အရေပြားအိုမင်းခြင်းက ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် မျက်ကွင်းအောက် အညိုအမည်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ နေပူထဲထွက်မယ်ဆိုရင sunscreen လိမ်းပါ။ ဦးထုပ်ဆောင်းပါ။
၃။ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ
သခွားသီးနှင့် လက်ဖက်အိတ်လို အိမ်မှာအလွယ်ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက မျက်အိတ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တိုက်ထုတ်ရာမှာ အကျိုးရှိပါတယ်။ သခွားသီးက အေးမြခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး လက်ဖက်အိတ်မှာပါတဲ့ caffeine နဲ့ tannins က အသားအရေကို တင်းကျပ်မှုနဲ့ ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ သခွားသီး (သို့) လက်ဖက်အိတ်တွေကို ၅ မိနစ်စီကပ်ပေးပါ။
သခွားသီးအေးအေးလေးနဲ့ လက်ဖက်အိတ်တွေ ကပ်တဲ့နည်းလိုပဲ ရေခဲတုံး၊ ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးခြင်းက မျက်အိတ်ဖောင်းခြင်းနှင့် မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲလိမ်းပေးခြင်းက အရေပြားကုစားခြင်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး အသားအရေကို အသစ်တဖန် ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေပါတယ်။
ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အိပ်စက်ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အခါ အသားအရေ ပိုဖြူရော်လာပါတယ်။ မျက်လုံးအောက်မည်းခြင်းကို ပိုသိသာလာစေပါတယ်။ မျက်လုံးအောက်ရှိ အရေပြားက အရမ်းပါးလွှာတာကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကနေ အလွယ်တကူ မည်းလာနိုင်ပါတယ်၊ အရွယ်ရောက်သူတွေအနေနဲ့ မျက်နှာကို လ်းလန်းဆန်းဖြစ်စေဖို့ အနည်းဆုံး ၇နာရီမှ ၉နာရီအိပ်စက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၆။ moisturizers လိမ်းပါ
မျက်နှာကို အဆီ၊ moisturizers တွေနဲ့ အစိုဓါတ်ဖြည့်ပေးခြင်းက လိုင်းတွေနဲ့ အရေးအကြောင်းဖြစ်တာတွေကို တားဆီးပေးပါတယ်။ antioxidants ပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့ မျက်နှာအလှကုန်တွေကို ရွေးချယ်ပါ။ မျက်နှာပေါ်မှာ တစ်ခုခုလိမ်းတဲ့အခါ နှိပ်နယ်ပေးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုက သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။ နေ့စဉ် moisturizers အတွက် လူကြိုက်များတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကVitamin E (သို့) C cream ၊ ဗာဒံဆီနဲ့ အုန်းဆီတို့ဖြစ်ပါတယ်။